I Malolwane dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 406. Ny laharam-pokontaniny dia 16. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Malotwana Siding dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 608. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Malwelwe dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 146. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia -24.050447 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.272008.
I Mambo dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 569. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia -20.796258 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.333864.
I Manaledi dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 258. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -22.68733 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.47713.
I Mandunyane dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 3 589. Ny laharam-pokontaniny dia 14. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mantshwabisi dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 942. Ny laharam-pokontaniny dia 7. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Manyana dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 3 550. Ny laharam-pokontaniny dia 16. Ny laharam-pehintaniny dia -24.773698 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.59286.
I Maokane dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 044. Ny laharam-pokontaniny dia 26. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mapoka dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 789. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -20.538042 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.589014.
I Maposa dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 413. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Maralaleng dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi South any Botsoana. Ny isam-poniny dia 586. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Marapong dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 283. Ny laharam-pokontaniny dia 5. Ny laharam-pehintaniny dia -20.892847 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.072058.
I Maratshwane dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 305. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Marobela dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 672. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Marojane dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 402. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Masingwaneng dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 677. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -20.848348 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.325357.
I Masukwane dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 630. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Masunga dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 5 666. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -20.624546 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.448752.
I Matebeleng dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 196. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Matenge dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 422. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -20.853146 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.262865.
I Mathangwane dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 5 075. Ny laharam-pokontaniny dia 9. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mathathane dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Bobonong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 672. Ny laharam-pokontaniny dia 10. Ny laharam-pehintaniny dia -22.268754 ary ny laharan-jarahasiny dia 28.749456.
I Matlapana dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 449. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -22.721051 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.525251.
I Matlhako dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 752. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Matlhakola dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 996. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Matobo dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 136. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia -20.559727 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.115409.
I Matopi dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 361. Ny laharam-pokontaniny dia 2. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Matsaudi/ Sakapane dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 345. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Matshelagabedi dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 871. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia -21.121641 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.66477.
I Matsiloje dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 380. Ny laharam-pokontaniny dia 16. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Matsitama dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 309. Ny laharam-pokontaniny dia 28. Ny laharam-pehintaniny dia -20.985539 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.578513.
I Maubelo dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi South any Botsoana. Ny isam-poniny dia 514. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Maun dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 60 263. Ny laharam-pokontaniny dia 45. Ny laharam-pehintaniny dia -19.983333 ary ny laharan-jarahasiny dia 23.416667.
I Maunatlala dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 4 552. Ny laharam-pokontaniny dia 18. Ny laharam-pehintaniny dia -22.597007 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.630057.
I Mbalambi dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 037. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Medie dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 424. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Metlobo dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 891. Ny laharam-pokontaniny dia 16. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Metlojane dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 726. Ny laharam-pokontaniny dia 2. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Metsibotlhoko dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 403. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Metsimotlhabe dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 8 884. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mhalapitsa dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 019. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia -22.7941 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.23297.
I Middlepits dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi South any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 121. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mmadikola dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Boteti any Botsoana. Ny isam-poniny dia 830. Ny laharam-pokontaniny dia 2. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mmadinare dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Bobonong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 12 086. Ny laharam-pokontaniny dia 107. Ny laharam-pehintaniny dia -21.95 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.616667.
I Mmakgori dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 741. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mmankgodi dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 6 802. Ny laharam-pokontaniny dia 13. Ny laharam-pehintaniny dia -24.726011 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.649631.
I Mmanoko dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 932. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia -24.474413 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.676293.
I Mmanxotae dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 643. Ny laharam-pokontaniny dia 6. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mmaphashalala dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 044. Ny laharam-pokontaniny dia 7. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.